नेपाली युनिकोडमा टाइप गर्ने सजिलो तरिका - Tech News Nepal Tech News Nepal
काठमाडौं । ल्यापटप अथवा कम्प्युटरमा सिधै नेपालीमा टाइप गर्नुपर्‍याे भने के गर्ने ? विकल्पहरू त टन्नै छन् । तर सजिलो उपाय के होला ? आज म यिनै कुराको जवाफ लिएर आएको छु ।
नेपाली युनिकोड किन जरूरी छ वा यसको महत्व के छ ? कुरा यहीँबाट सुरु गरौं । युनिकोड भनेको युनिभर्सल कोड हो । जब हामी नेपाली अक्षरलाई युनिकोडमा लेख्छौं, त्यो गुगल वा इन्टरनेटको दुनियाँले पनि सहजै पहिचान गर्न सक्छ ।
अहिले विभिन्न वेबसाइट बनेका छन्, जसबाट हामीले रोमनमा नेपाली टाइप गर्न सक्छौं । नेपाली फन्टमा भएका अक्षरहरूलाई एक क्लिकमै युनिकोडमा रूपान्तरण गर्न पनि सक्छौं । जसको लागि इन्टरनेटको जरूरत भने पर्छ ।
इन्टरनेट नहुँदा माइक्रोसफ्ट वर्डमा नेपाली फन्ट सेलेक्ट गरेर पनि पनि नेपाली अक्षरहरू लेख्न त सकिन्छ । वा विण्डोजमा ल्याङ्वेज सेटिङमा गई नेपाली युनिकोड छनौट पनि गर्न सकिन्छ ।
काठमाडौं । पछिल्लो समयमा ई-सिमको चर्चा निकै चलिरहेको छ । विश्वका केही देशमा ई-सिमको प्रयोग